Semalt: Ukucoca amawebhsayithi eDynamic kunye neWebra Scraper Chrome Extension
I-Web Scraper i-plugin ye-Google Chrome iplajista yokukhangela ekhiphe idatha ukusuka kumasayithi kunye namaphepha ewebhu. Ukusebenzisa ukongezwa kwe-chrome i-web scraper , unokwenza i-sitemap ngendlela iphepha lewebhu okanye i-website kufuneka ifunyenwe ngayo. Ngekhasi lakho lewebhu, i-web scraper ihamba ngephepha lewebhu kwaye idibanisa yonke idatha efanelekileyo njengoko iyalwe.
Iinzuzo ze-plugin ye-Web Scraper ye-Chrome plugin
Idata efunyenweyo usebenzisa isongezelelo sewebhu se-chrome ithunyelwa ngaphandle njengefayile ye-Comma-separated values ​​(CSV).I-Web scraper iyi-plugin-click-scraper ye-plugin engasetyenziswa ngabani na. Ngaloo ndlela ungasindisa zombini imali kunye nexesha kwaye ngexesha elifanayo ufumane ulwazi oluxabisekileyo kwiwebhu.
Ibhanki igcwele ulwazi oluncedo noluncedo. Nangona kunjalo, ukufumana idatha kwiifom ezisebenzisekayo nezifundekayo akusoloko kulula. Yingakho udinga ukongezwa kwe-web scraper. Iirekhodi zikawonkewonke, iincwadi, i-inventory inventory, kunye nokuhlaziywa komsebenzisi kungaguquleka kwiinkcukacha ezibalulekileyo. NgeWebra Scraper, yonke le datha inganakwa kwaye igcinwe kakuhle.
Iimpazamo eziqhelekileyo ezichaphazela i-web scrapers
Iphutha elingenakufundiswa: Iphutha le-Syntax
Chofoza ukushiya umphumo kwiqhosha
Ingxaki yokutsala iphepha
I-URL engagqibekanga yekhonkco yokuphambuka
I-Web Scraper: I-Solver Problem
IWebhu i-scraper iyona mgangatho ophezulu kwaye isetyenziswe ngokulula ukuyisebenzisa. Ukukhipha idatha kumaphepha ewebhu kunye neewebhsayithi, kufuneka ukhethe i-target-text while i-web scraper yenza umsebenzi wonke. Ekubeni i-web scraper i-automate efini, akufanele uxhalabe ngokukhangela amaphutha okanye ezinye iimeko.
Nge-web scraper, iziphumo ozifunayo ziqhutywa ngokukhawuleza kwifayile ye-CSV. Ukuba ukhetha ukugcina idatha kwi-Couch DB okanye kwi-Chrome yesitoreji sendawo. Asikho isidingo sokwesaba ngenxa yokuba awuyiprogram. Ukuba ungasebenzisa isiphequluli se-Google Chrome, ungasebenzisa ukongezwa kwe-web scraper.
Ukuba isisombululo sakho esilandelayo siza kuqesha umkhosi wabasebenzi ukuba baqhekele idatha kuwe yonke imihla, isisombululo esinokubangela isisombululo sagxotha nje emnyango wakho. Nge-web scraper, awudingi iprogram ukuphuhlisa isisombululo sokukhusela idatha yakho. Yonke inqubo yokukhutshwa kwedatha iya kwenziwa kuwe. Khuphela uze ufake i-web scraper mahhala kwisitoreji sewebhu se-Google Chrome.
Iimpawu ze-plugin ze-Web Scraper
I-Web Scraper iye yafaka izinto ezibambe iqhaza kwinkqubo yeeprojekthi zakho. Nazi izixhobo eziphambili omele wazi ngazo:
Iyahambelana nesiphequluli se-Chrome
I-Web Scraper yi-plugin ye-Chrome echonga idatha ngokwekhasi le-sitemap. Ngalolu hlobo, unokuqhuba amanqaku athile okanye amaninzi okanye uphononise iiseti ezinkulu zeedatha kwishedyuli ehleliweyo.
Ukuthunyelwa kwedatha ekhishiwe njenge-CSV
Le phandle ye-plugin ye-export exraped data njengeMilinganiselo ehlukaniswe ngama-Comma. Nangona kunjalo, unako ukugcina idatha ekhishwe njengeCouchDB okanye isitoreji sangasese saseC Chrome.
Ukukhangela idatha kwiindawo ezinamandla kunye namaphepha
Ukusebenzisa i-plugin ye-Web Scraper, unokwakha i-sitemap echaza i-target-text kwikhasi lewebhu Source . Thatha isipiliyoni sakho sokutsala kwelinye nqanaba ngokufaka iWeb Scraper kwisiphequluli sakho se-Google Chrome!